Ku cabida keeg isbuunyo yogurt leh glaze miro qalalan | Xeerarka ThermoRecipes
Keeg ku shub yogurt si aad u cabto
Cunto fududDaqiiqado 55Dadka 12Kalooriyeyaasha 190
Keegga maanta aan sameynay leh yogurt dareere ah. Noocyada noocaan ah, ama macmacaanka la cabi doono, badanaa waxay leeyihiin dhadhan daran oo, taas oo kuxiran midka aan doorano, dhadhanka keegga isbuunyada ayaa isbadala.
Dusha sare waxaan ku dhejinay wax fudud dhaldhalaalka miraha dhalaalay. Waxaan isticmaalay nuts oo lagu daboolay malab iyo milix laakiin sidoo kale waad isticmaali kartaa looska dabiiciga ah.
Cajiinka keega ma ahan mid aad u qaro weyn waana sababtaas icing waxay u egtahay inay gudaha kuleylka. Keegga ayaa markaa yeelan doona laba midab oo kala duwan iyo laba dhadhan oo kala duwan. Caleemaha waxaa la saaraa cajiinka keega ka hor intaan la dubin xitaa waa loo isticmaali karaa ku samee sawirro dusha sare.
1 Keeg isbuun leh caano fadhi la cabo iyo glaze miro la qalajiyey
Keeg isbuun leh caano fadhi la cabo iyo glaze miro la qalajiyey
Keeg aad u fudud oo lagu sameeyo yogurt dareere ah.
Waqtiga diyaarinta: 10M
Waqtiga karinta: 45M
Wadarta waqtiga: 55M
100 g oo lows ah (miino lagu dahaadhay malab iyo milix)
Ukunta 1 cad
Wixii ku dhufanaya keega:
3 ukun iyo 1 jaallo ah
Sonkorta 120 g
240 g oo caano fadhi ah (caano fadhi)
Maqaarka iyo casiirka liinta 1/2
85 g oo saliid ah gabbaldayaha
260 g bur
1 baqshad khamiirka nooca Royal
Looska waxaan galinay dhalada. Waxaan barnaamijka 6 ilbiriqsi, xawaare 6-8. Waxaan ku keydinaa baaquli.
Waxaan ku dhejineynaa balanbaalista garbaha (muhiim maahan marka hore in la dhaqo galaaska). Waxaan gelineynaa 3 ukumood iyo 1 yolk galaaska (cadka ukuntaas afaraad ayaa loo hayaa si hadhow loogu diyaariyo dhalaalka). Waxaan barnaamijka 3 daqiiqo, xawaare 3.
Waxaan ku darnaa yogurt, cusbo, maqaarka liinta nuska ah, casiirkeeda iyo saliideeda. Waxaan barnaamijka 8 ilbiriqsi, xawaare 3.
Waxaan ka saaraynaa balanbaalis. Ku dar burka iyo khamiirka. Waxaan barnaamij 10 ilbiriqsi, xawaare 5.
Waxaan ku dhejinay cajiinteenna caaryo qiyaastii ah 22 sentimitir oo dhexroor ah, horeyna loo duubay.
Si aad u dhammeyso diyaarinta miraha, isku dar ukunta cad ee aan keydinay iyo lowska aan daaqnay bilowgii. Waxaan ku qasin karnaa fargeeto ama qaaddo.
Waxaan u qaybinaa shahwadayada qaaddo dusha dusha sare ee doolshada.
Waxaad ku karisaa 180º (foornada diirran) ugu yaraan 45 daqiiqo. Usha dhajinta waxaan ku hubin karnaa haddii si fiican loo dubay (waxay noqon doontaa markii aad daloolto keegga ushayadu soo baxdo oo nadiif ah).
Waxaan ku xoqi karnaa maqaarka liinta nuska ah galaaska, kahor intaanan bilaabin karinta. Waxaan kaliya u baahanahay inaan ku dhejino qaybta hurdiga ah ee maqaarka dhalada oo aan dhaqaajino xawaare sare ama xitaa dhowr istaroog turbo. Ha iloobin inaan kaliya danaynayno qaybta huruudda ah (qaybta cad ee maqaarka waan iska ilaalinaynaa maxaa yeelay waa qadhaadh)
Macluumaad dheeraad ah - Sida loo sawiro ubax doolshaha
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » General » Keeg ku shub yogurt si aad u cabto
Waxay u egtahay mid fiican, laakiin waxaan su'aal ka qabaa: xajmiga, ka hor intaadan ku darin caddaanka miraha lowska, miyaanay ahayn in la karbaasho?
Si fiican ugula qas fargeeto ama qaaddo waa ku filan tahay.
Kiwi iyo salad prawn
Cheesecake leh miraha loo yaqaan 'Blueberries'